Nabadoon Cabdiqafaar khatal: “Puntland xaq ayey u leedahay in ay heshiisyo la gasho dowladaha caalamka” (dhegayso) – Radio Daljir
Abriil 26, 2018 8:59 g 6
Cabdiqafaar Faarax Jaamac Khatal oo kamid ah Nabadoonada Gobalka Mudug gaar ahaan Magaaladda Gaalkacyo oo Caawa Waraysi Gaar ah sinayeey Radio Daljir ayaa ka hadlay Arrimo baddan oo kamid ah xaalka Dalka iyo Go’aanki Dowladda Puntland ka qaadatay Arrimaha khilaafka Dowladda Federaalka iyo Imaraadka Carabta.
Nabadoon Cabdiqafaar ayaa Tageeray hadalki Madaxweyne Gaas ee ku saabsana in Imaraadka uu Madax banaanyahay in mashaaric uu ka fuliyo Puntland ,isla markaana uu sii waddo Imaradka Tageerada uu siyo Puntland,isago imaraadka Tababar siiya Ciidamadda Badda Puntland.
Nabadoonku Wuxuu ku sheegay Waraysiga uu sinayeey Daljir in Dastuurka Puntland uu dhigayo in Dowladda Puntland ay Heshiis Ganacsi la saxiixan karto dowladdaha danaynaya inay Xirir la yeeshan Puntland ,isago sheegay in Xaq ay u leedahay Dowladda Puntland inay soo dhaweyso Cid kasto tageero siinaysa.
Cabdiqafaar ayaa shegay Deeqaha Dowladda dhexe ay ka hesho Caalamka lagu koobo oo Kaliya Magaaladda Muqdisho ,isla markaana Puntland aysan helin xaqeeda,balse uu soo dhaweynayo hadalki Madaxweynaha Dowladda Puntland Cabdiweli maxamed Cali uu Imaraadka kajeediyeey ee ahaa in Somaaliya ay ahayn xamar oo kaliya .
Dhinaca Kale Nabadoonku wuxuu ka hadlay Doorashadda Madaxtinimadda Puntland ee sanadka 2019 kadhacaysa Puntland ,isago sheegay in an laga gaarin doorasho Hal Qof iyo Hal Cod ah Balse qiyaas ahaantiisa doorashadu ay ku dhici doonto qaabki horey loogu soo dooran jiray Hogaamiyaasha ee Barlamaaniga ahaa.
Maxamed Lakiman ayaa Waraystay Nabadoonka
C/raxman Adan 2 years
waxaan doonayaa inaad wareysi iga qaadaan telefoonkeyguna waa 0046762307406
Budlaand hacadaysato inay go,ayso
Nabadoon iyo siyaasad waa meel laga waalanyahay
Puntland waa in lasiiya cashiro kusabsan federalka